ဘာကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်တွေ လက်ကို မကြာခဏစင်ကြယ်စွာ ဆေးကြောသင့်သလဲ? – BurmeseHearts
ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်များ ရံဖန်ရံခါဆိုသလို လက်ကို စင်ကြယ်စွာ ဆေးကြောသင့်သည်။ မစင်ကြယ်သောလက်မှသည် ရောဂါပိုးမွှားများ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ဝင်ရောက်ကာ မိမိလွယ်ထားသော နုနယ်သည့် ဖွံဖြိုးဆဲ သန္ဓေသားကို အသက်သေစေသည်အထိ ထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ရေအိမ်သွားပြီးချိန်တွင်သော်လည်းကောင်း ၊ သားငါးများ ကိုင်ပြီးလျှင်သော်လည်းကောင်း လက်များကို သန့်စင်အောင် ဂရုတစိုက် ဆေးကြောပေးသင့်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်တွေ ဘာကြောင့် အလေးအပင်မခြင်း နှင့် x-ray ရိုက်ခြင်းတို့ ရှောင်သင့်သလဲ?
BurmeseHearts	 Jul 16, 2015 0